QC Kuba Pcb - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
LeMithetho Design Khangela (DRC) kulinyathelo elibalulekileyo kakhulu kulawulo lomgangatho PCB. Xa sifumana umyalelo entsha esuka umthengi, siya kusebenzisa sisixhobo automated ukuqinisekisa ukuba Ubeko akanalo naluphi na ukubekwa ethile, umzila okanye ezinye iimpazamo iyaziseka sebhodi.?
Olu hlolo DRC liya kutshekisha netlist nokuma nxamnye izithintelo uyilo PCB kunye nemithetho. Iqwalasela ibhodi kaThixo icandelo nokubekwa siphande nomzila ingqibelelo yeziXhobo zidlulela, nezikhonkwane untraced, engachanekanga umaleko nokubekwa kunye nemiqobo ukuba APHO iseti enye ububanzi umkhondo yomgudu kunye clearances.?We nabo benze uvavanyo umthetho yokuvelisa ukuqinisekisa uyilo PCB yi manufacturable. Ukuba sifumanisa naziphi na iziphoso siza kuyithathaphi wadibana ngumthengi.
Umatshini odolo : Sinikela Flying-Ihlole E-Test for umthamo kunye kwase imiyalelo ezincinane. Ibhodi yesekethe wakho (PCB) ikhangelwe kusetyenziswa isixhobo ebizwa Flying-Ihlole E-Tester. Abahloli zihlole Flying sisebenzisa ukuba izithintelo ezimbalwa ukufikelela, akudingi zalapho uvavanyo, kwaye uvavanyo iiplanga inani phantse mda iminatha. I Tester liya kutshekisha ukwenzela iziphaluka elifutshane, iziphaluka ezivulekileyo kwaye uqinisekise iminatha ye PCB esizenzileyo iyafana iminatha kuyilo yakho. Emva kokuba uvavanyo lugqityiwe, i fail izinga iibhodi akho aya kuba ngaphantsi kwe-1%.?
Orders Imveliso : Sisebenzisa imidlalo Testing ukuvavanya imiyalelo imveliso. A umandlalo izikhonkwane tester luvavanyo electronic bemveli lidlala leyo eye izikhonkwane emininzi kufakwa ezinemingxuma an epoxy izakhi iglasi ngelaphu sheet elaminethiweyo (G-10) ehambelana usebenzisa izikhonkwane tooling ukuze sinxibelelane ngamanqaku uvavanyo kwibhodi yesekethe eprintiweyo.
Lo mdlalo iqulethe uluhlu lwe, spring-lolayisho izikhonkwane ezincinane Pogo; pin Pogo ngalinye ludibana node elinye busebenze yase DUT (isixhobo phantsi test). Ngokucinezela i DUT kulwa esililini lezikhonkwane, qhagamshelana enokuthenjwa kunokuba kwenziwe ngokukhawuleza kwaye ngaxeshanye kunye namakhulu okanye amawaka amanqaku test ngamnye ngaphakathi busebenze le DUT.
I Tester liya kutshekisha ukwenzela iziphaluka elifutshane, iziphaluka ezivulekileyo, uze uqiniseke iminatha ye PCB esizenzileyo iyafana iminatha kuyilo yakho. Emva kokuba uvavanyo lugqityiwe, i fail izinga iibhodi akho aya kuba ngaphantsi kwe-0.1%.
AOI (Esizenzekelayo ukuhlolwa optical)
Sisebenzisa i AOI ukukhangela zomaleko angaphakathi multi-layers PCB. AOI abangaboni icinga kumphezulu PCB. Ibhodi bekhanyise imithombo ukukhanya eziliqela yaye waphawula ngu isithwebuli okanye inani neekhamera definition ophezulu. Oku kwenza ukuba kubekwe zonke iinkalo ebhodini.
AOI ukuba ukuhlolwa ibhodi PCB ebalelelwe lilanga uya ukubona ezi mpawu:
* Line ububanzi kwephulwa
* Yokuhlukumeza Spacing
* Copper ngokugqithiseleyo
* Missing zokubhala. ? Ie isici kufuneka ebhodini ilahlekile
* Shorts iziphaluka
* Nentwana Sika okanye pads
* Hole breakage. (Ngokuphukela)? Ie umngxuma ezisukwe (via) lingaphandle pad yayo indiza?
Le lihlolwa kakhulu ngakumbi ethembekileyo repeatable ngaphezu uhlolo olubonakalayo manual.
Thina ISO 9001: 2008 eqinisekise. Kwaye uchaze ngokufutshane indlela yethu yolawulo lomgangatho hlobo :?
* Nkqubo wethu umgangatho kukho amazwi ezisesikweni zolawulo lwethu, inxulumene ukuba isicwangciso soshishino kunye nentengiso zethu kwiintswelo zethu lwabathengi. nkqubo yethu umgangatho liqondwe kwaye ilandelwe kuwo onke amanqanaba, yaye bonke abaqeshwa. abasebenzi bethu uza kusebenzisa iinjongo ezingqinisisekayo ukuba basebenzele.
* Yonke data yolawulo Umgangatho kubhaliwe. Iingxelo ziya kubonisa indlela apho izinto ekrwada kunye neemveliso eziye zajongwa, oku ukuvumela iimveliso kunye neengxaki kunokwenzeka ukuba zibangelwa kumthombo. Inkqubo yethu yolawulo umgangatho kuphicothwa rhoqo baze bavandlakanyelwe unyuselo akahambelani kunye nokusebenza.
* Inkqubo yethu yolawulo lomgangatho ubhala iimfuno zomthengi yaye kudala inkqubo lokunxibelelana abathengi malunga kwengcaciso ngemveliso, imibuzo, izivumelwano, imiyalelo, iingxelo kunye nezikhalazo.
* Siya rhoqo ngokutsha ukusebenza kwenkqubo yethu yolawulo lomgangatho ngokusebenzisa uphicotho lwangaphakathi kunye neentlanganiso. Njani enoba okanye hayi inkqubo umgangatho luyasebenza kwaye yintoni uphuculo zingenziwa. Siza kujongana neengxaki ngaphambili kunye neengxaki. Inkqubo yethu igcina namarekhodi ale misebenzi kunye nezigqibo onesiphumo, kwaye esweni impumelelo yabo.
* Siye kwixwebhu iinkqubo zokujongana kanye ezinokubakho non-conformances (iingxaki ezibandakanya kubanikezeli okanye abathengi, okanye iingxaki lwangaphakathi). Inkqubo yethu yenza aqinisekise ukuba yonke imveliso (s) kuthathwa 'zimbi' ukuba ke uMiriyam kwaye kungekho namnye unako ukusebenzisa imveliso embi de sinako ukubona ukuba yintoni ezakwenziwe malunga wathi imveliso embi, Siya kufuna kwaye ijongane ingcambu unobangela wale ngxaki ( s) bagcine iirekhodi ukusebenzisa njengesixhobo ukuphucula inkqubo yethu.
iimveliso zethu ukuthobela kwezatifiketi ukhuseleko ul 94V-0. Zonke PCBs zethu ukuhlangabezana idangatye rating 94V-0 kwaye anelise zonke iimfuno ul. Lo mlinganiselo ilangatye ul 94 nganye ichaza ukumelana inxalenye 's polymeric zomlilo. amanqaku okufana eziphathekayo PCB zezi 94V-1 okanye ngcono. Okuya kusiba phantsi inani, kungona nelangatye rating (umzekelo, 94V-0 owaziwayo ngaphezulu 94V-1).
Thina ul eqinisekisiweyo kwaye logo yethu inkampani ezimnombo kuluhlu abavelisi PCB ogunyazisiweyo ul 's. Ukuze sibe semthethweni kolu didi, omnye umenzi PCB ixhomekeke uhlolo ezizimeleyo ul of inkqubo yayo yokuvelisa kunye nezinto.
Nomqathango inkunkuma Directive okanye RoHS yamkelwa ngoFebruwari 2003 yi-European Union. Le RoHS Umyalelo ukusebenza ngoJulayi 1, 2006, kwaye ke kufuneka ukuba igcinwe ize ibe ngumthetho karhulumente ilungu ngalinye. Lo myalelo evumela ukusetyenziswa kwezixhobo ezintandathu eziyingozi ekwenziweni iintlobo ezahlukeneyo izixhobo ze-elektroniki kunye zombane.
Ukususela ngoJulayi 1st 2006 izixhobo zombane nenekhompyutha yaziswa kwi market Europe kufuneka lingaqulathi ilothe, imetyhuri, isiqalelo esithambileyo esimhlophe, hexavalent chromium, okanye idangatye retardants biphenyl polybromide, okanye polybromide diphenyl kaEtere.
Zonke phambili finishings zethu free: Lead HAL ezamahala, ukuntywiliselwa yesilivere, ENIG kunye osp zonke ziyazithobela iimfuno RoHS.